२५ वर्षीया छोरीको कलेजो वुवालाई प्रत्यारोपण – Nepali news portal
२५ वर्षीया छोरीको कलेजो वुवालाई प्रत्यारोपण
२२ चैत्र २०७७, आईतवार १२:४७ April 4, 2021 काठमाडौं डेष्क
भक्तपुरमा रहेको सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ४४ वर्षीय पुरुषको सफल कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ ।
उनलाई २५ वर्षीया छोरीले कलेजो दान गरेको केन्द्रका निर्देशक डा. प्रेमराज ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रमा कार्यरत डा. छेतेन योञ्जन, डा.अनिसा तिवारी, डा. ललित दास, एनेस्थेसियामा डा. आरती राई, डा. सुशील तामाङ तथा नर्सहरु विनिता उप्रेती लगायतको टोलीले प्रत्यारोपण गरेका हुन् ।
उनीहरुलाई भारतको म्याक्स अस्पतालबाट आएका डा. शलिन अग्रवालसहितको टोलीले ब्याक सपोर्ट गरेको डा. ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म नेपालमा १२ जनामा कलेज प्रत्यारोपण भइसकेको छ ।